Chitatu 18 Nyamavhuvhu 2021
Mutsipa Iyo yakasvibirira colorter yakafuridzirwa ma ruffs, yekare mitsipa yekushongedza iwe iwe unogona kuona pane dzakawanda dzakanaka pendi ye XVI uye XVII yezana. Inoratidzirwa neyakagadzirwa uye yemazuva ano dhizaini, kurerutsa yakajairwa ruffs maitiro kuyedza kuti ive yemazuva ano uye yemazuva ano. Mhedzisiro inogadzirisa iyo inopa kwakanaka kune iye anopfeka, kushandisa dema kana chena mavara inobvumira kuwanda kwekusanganiswa neyakagadzirwa ikozvino uye kwakachena. Iyo imwe-chidimbu mutsipa, inoshanduka uye yakareruka. Chinhu chisina-kukosha asi chine yakakwirira fashoni chinonakidza dhizaini chinoita kuti colell iyi isangove chishongo asi chishongo chemuviri chishongo.
Chipiri 17 Nyamavhuvhu 2021
Zvishongo-Mhete Pane chimwe chiitiko chinoramba chichibata maitiro edu, kutimisa isu takafa mumakwara edu. Zvinoitika zvemashura zvekupora kwezuva zvakafadza vanhu kubva pazera rekutanga revanhu. Kubva pane kusviba kwekukurumidza kwedenga uye kudzima kweZuva kwakaburitsa mumvuri murefu wekutya, kusafungidzira, uye kushamisika pane fungidziro Mamiriro ekunoshamisa ezuva nezuva anosiya maonero anogara pane isu tese. Iyo 18K chena goridhe madhaimani eclipse hoop mhete akafuridzirwa neiyo 2012 solar eclipse. Dhizaini inoedza kubata zvisinganzwisisike uye runako rwezuva nemwedzi.
Muvhuro 16 Nyamavhuvhu 2021
Shangu Dzakasarudzika Gianluca Tamburini mutsara we "sandal / akavezwa mabwe", inonzi Conspiracy, yakavambwa muna 2010. Kureba shangu kusabatanidza tekinoroji uye aesthetics. Chitsitsinho uye zvigadziko zvakagadzirwa kubva kuzvinhu zvakaita sehuremu alluminium uye titanium, wich yakakandwa mumhando dzakavezwa. Iyo silhouette yehangu shangu dzinobva dzasimbiswazve nehafu / matombo anokosha uye mamwe emvere dzakanaka. Tekinoroji yepamusoro uye yekucheka machira inogadzira chifananidzo chemazuva ano, chine chimiro cheshangu, asi ipo kubata nekuziva kwehunyanzvi hwekunyanzvi hwekuItaly kuchiri kuoneka.
Svondo 15 Nyamavhuvhu 2021
Brooch Hunhu uye chekunze chimiro chechinyorwa chinobvumira kuchinja dhizaini nyowani. Mune yakasikwa nguva imwe nguva inochinja inoenda kune imwe. Chitubu chinotevera chando uye mangwanani anouya mushure meusiku. Iwo mavara anochinjawo pamwe nemudenga. Iyi nheyo yekutsiva, kuchinjana kwemifananidzo inounzwa mberi mukushongedzwa kweiyo "Asia Metamorphosis", kuunganidzwa uko kwati nyika mbiri dzakasiyana, mifananidzo miviri isingafarirwi inoratidzwa muchinhu chimwe. Zvinogoneka zvinhu zvekuvakisa zvinoita kuti zvichinje chimiro uye chitarisiko chishongo.
Mugovera 14 Nyamavhuvhu 2021
Chipfeko Chemazuva Ano Loafer
Chishanu 13 Nyamavhuvhu 2021
Chipfeko Chemazuva Ano Loafer Le Maestro inoshandura shangu yekupfeka nekuisa iyo Direct Metal Laser Sintered (DMLS) titanium 'matrix chitsitsinho'. Iyo 'matrix chitsitsinho' inogadzirisa chikamu chechitsitsinho chinorema uye inoratidza kuvimbika kwechimiro cheshangu yekupfeka. Kuyanidza yakanakisa vamp, yakakwirira-yezviyo ganda rinoshandiswa kune yepamusoro yakasarudzika asymmetrical dhizaini. Iko kubatanidzwa kwechikamu chitsitsinho kumusoro iko zvino kwakasanganiswa kuita yakaomeswa uye yakanatswa silhouette.
Calendar 2014 “Town” Khalenda Chishanu 17 Gunyana
Artificial Topography Yekuisira Topography China 16 Gunyana
Conspiracy - Sandal shaped jewels- Shangu Dzakasarudzika Chitatu 15 Gunyana
Mutsipa Zvishongo-Mhete Shangu Dzakasarudzika Brooch Analogue Wachi Chipfeko Chemazuva Ano Loafer